Accueil > Gazetin'ny nosy > Ben’ny tanànan’Antsirabe: Manitsakitsaka ny zon’ny mponina ao an-toerana
Ben’ny tanànan’Antsirabe: Manitsakitsaka ny zon’ny mponina ao an-toerana
Tranga iray nahasarika ny mason’ny mpanara-baovao maro tao andrenivohitr’i Vakinankaratra ao Antsirabe ny famotehan’ny manam-pahefana ara-panjakana any an-toerana ny mponina. Isan’izany ireo mponina nanajary ny tany ao amin’ilay tany antsoina hoe “Roubaisienne et Australia” ao Ambohimanarivo.
Efa hananika 25 taona no nanajary ny tany tao ireo mponina, ary isaka ny miova ny tompon’andraiki-panjakana ao an-toerana, indrindra fa ny ben’ny tanàna sy ny tompon’andraikitra ny distrika, dia misy manetsika hatrany ny raharaha hanaisorana an’ireo vahoaka nanajary an’io toerana io.
Efa hatrany amin’ny taom-polo 90 tany tokoa mantsy no nonina sy nikarakara ary nanomboka nanajary ny tany tao ireo mponina. Nisy koa ny firosoan’izy ireo hisitraka ara-panjakana ireo tany nohajariany sy nomaintisin’izy ireo molaly tany. Etsy ankilany dia io toerana io hatrany no tondroin’ny tompon’andraiki-panjakana any an-toerana fa tokony hanatanterahana ny tetik’asan’ny fitondram-panjakana foibe rehefa misy ny fangatahana tany avy aty Antananarivo.
Sahin’ireo “tompomenakelin’ny fitondrana foibe” na ny olom-boafidy “mpamadika vahoaka” any ny manao tatitra diso na hosoka mihitsy amin’ny mpitondra foibe, toy ny hoe “tany lava volo io ka azo ananganana fotodrafitrasa”, sy ny toa izany.
Rehefa midina mijery ifotony eny anefa ny iraka ny fitondrana foibe dia zendana raha mahita fa toerana efa nohajarian’olona, misy fotodrafitrasa toy ny trano fonenana, ary manamaintimolaly ny tany amin’ny alalan’ny fambolena sy fiompiana ireo mponina eo.
Tamin’ny fitondrana Ravalomanana dia efa nokasain’ny mpitondra ho noesorina ireo mponina, saingy ireny voatery nitsoaka nandositra nankany Afrika Atsimo ireny moa ny filohampirenena tamin’izany ka nitsahatra teo koa ilay fikasana. Tamin’ny fitondrana tetezamita dia nikasa hanangana oniversite sy Trano mora teo koa ny mpitondra fanjakana foibe. Nofahanan’ny lehiben’ny faritra tamin’izany fotoana abobo, dia Ingahy Razanakolona Paul, ny fitondrana foibe hoe “eo amin’io toerana io no azo hananganana izany”, saingy rehefa nandefa teknisianina nanadihady teny ny fitondrana foibe tao anatin’ny tetezamita dia nahita maso ny zava-nisy ka tsy niroso tamin’ny fanesorana an’ireo mponina.
Taty aoriana, lasa ben’ny tanàna Ingahy Razanakolona Paul. Dia mbola izy ihany indray no nandefa tatitra taty amin’ny Fitondram-panjakana foibe, ka nilaza fa io toerana “Roubaisienne et Australia” io no azo ananganana ny fotodrafitrasa hovatsian’ny Mpanjakan’i Maraoka vola, toy ny toeram-pitsaboana ho an’ny reny sy ny zaza mbamin’ny tetik’asa hafa.
Dia nisy ireo efa notrongisin’ny tompon’andraikitra ny tanànany tamin’ny 2016, fotoana hoe hidinan’ny mpanjakan’i Maraoka tany hametraka ny vato fehizoron’ireo tetik’asa. Ny sasany tamin’izy ireo efa nisitraka ny tambin-jony tamin’ny vola avy amin’ny mpanjakan’i Maraoka. Ireo mbola mitoetra eo kosa dia mbola tetehin’Ingahy Ben’ny tanàna hoesorina, na dia efa nampanantenain’ny tompon’andraikitra aza fa homena titra izy ireo, ary efa nananganany vaomiera manokana mihitsy moa nidina nanao fanadihadiana teny nanomboka tamin’ny volana oktobra lasa teo. Io vaomiera io izay nomen’Ingahy ben’ny tanàna Razanakolona Paul alalana manokana (ordre de mission) mba hamita iraka eo an-toerana. Ireo mpikambana ao amin’ilay vaomiera izay tsy iza moa fa Razafimandimby Pierre Eugène Fidèle, Naivoarilalao Ratobivelo, Ranarison Maminirina, Razafindrahango Marie Pascaline, Rakotondravao Joël Philippe, Raharisoa Josephine, Rakotorahalahy Pierre, Rakotoarison Jean Marie, Randretsamanana Laingonirina, Rafalinomezantsoa Emile, Razafindrakoto Mamitahiana Olivier, Razafindravao Jeannette, Ravaoarilala Rosita Sylviane, Nomenjanahary Iajaniaina, Raharinirina Voahangy Lalao Noeline, Ramanantsoa Felicité, ary Randrianasolo Gilbert.
Ny hanaisotra an’ireo mponina eo sy hametraka ny fotodrafitrasa no isan’ny fanadihadiana ampanaovina an’io vaomiera io. Misy amin’ireo mpikambana ao anatin’io vaomiera io, raha ny fanadihadiana nataonay, no tsy hafa fa isan’ireo mponina teo ka efa noesorina ary efa nisitraka ny tambin-jony, saingy mitetika ny hanorim-ponenana vaovao indray amin’ireo faritra mbola tsy tafiditra tao anatin’ny tetik’asan’ny Mpanjakan’i Maraoka, nefa efa misy mpanajary sy mpanamaintimolaly hatrany amin’ny taom-polo 90 no mankaty.
Etsy ankilany, Ingahy ben’ny tanàna Razanakolona Paul, dia mialokaloka ao andamosin’ireo tetik’asa hafa izay ideran’ny mponina sasany azy, saingy misoko mangina amin’ny tetik’asa hafa hanimbany ny fananam-bahoaka sy hanitsakitsahany ny zon’ny mponina ao an-toerana.